Israely: Mampiasa fitaovana elektronika mba hitoriana momba ny Fanjakan’Andriamanitra
MPONINA 4 409 131 383
MPITORY 718 716
FAMPIANARANA BAIBOLY 766 364
Zato ora hankalazana an’ilay zato taona
Nanaiky hianatra Baiboly ny vehivavy iray tao amin’ny tany iray any Azia. Mpilalao filma malaza izy sady mpilatro. Tonga dia nampihariny izay nianarany, ka nariany ireo boky momba ny herin’ny maizina sy ireo sampin’ny Bodista tao aminy.
Hoy ny namany iray taminy: “Maninona aloha ianao raha mifantoka amin’ny asanao mandritra ny telo taona, dia aorian’izay vao mianatra Baiboly indray e?”
Namaly izy hoe: “Efa ela be aho no nitady an’Andriamanitra, ka tsy hahemotro telo taona intsony ny fianarana momba azy.”
Niantso azy ny orinasa iray mpamokatra filma, tamin’ilay herinandro hanaovany ny anjarany voalohany tamin’ny Sekolin’ny Fanompoana. Homena karama be, hono, izy raha mifanaraka amin-dry zareo fa hanao izay anjara asaina ataony mandritra ny efa-taona. Tsy nanaiky anefa izy. Lasa mpitory tsy vita batisa izy tamin’ny Mey 2014. Nanapa-kevitra koa izy fa hanatratra 100 ora, ny volana Aogositra. Hoy izy: “Te hankalaza ny faha-100 taona nanjakan’i Jesosy aho, dia te hitory adiny iray isaky ny taona iray nanjakany!” Vitany tsara izany. Natao batisa izy tamin’ny Janoary 2015, ary mpisava lalana mpanampy izy izao.
Alina nitoriana tany am-ponja
Nitory tany amin’ny faritany tsy misy tompony ny anabavy efatra any Sri Lanka. Bodista no tena betsaka any. Notabatabain’ny moanina iray sy ny mpitondra taxi iray izy ireo ny andro faharoa nitoriany. Tsy ela dia nitangoronan’ny olona romotra be niisa 30 teo ho eo izy ireo. Tonga ny polisy ary naka azy efa-bavy. Nogadraina nandritra ny alina izy ireo, nefa tsy nisy zavatra niampangana azy akory. Natambatra tamin’ny mpanao heloka bevava izy ireo, ary nompan’ireo voafonja sady nanaovany resaka mamoafady. Afaka nitory anefa izy ireo. Hoy ny anabavy iray: “Nogadraina niaraka tamin’ny mpamono olona aho, nefa afaka nitory ny fahamarinana. Gaga ry zareo nahita ahy nigadra tao ka nanontany momba ny zavatra inoako. Ny lehilahy iray aza nanontany hoe: ‘Fa maninona ianao no falifaly hoatr’izao?’”
Sri Lanka: Nandeha bisy ny anabavy efatra mba hitoriana tany amin’ny faritany tsy misy tompony
Nandefa fitarainana tany amin’ny Fitsarana Tampony any Sri Lanka ireo rahalahy. Tsy nanaja ny zon’olombelona mantsy ny polisy, fa nanagadra olona tsy amin’antony. Nanaiky handinika an’izany ilay fitsarana, ary mbola andrasana ny valiny hatramin’izao.
Nahazo fanampiana ilay vehivavy malemy
Mpisava lalana any Japon i Michiko. Nampianatra vehivavy zokiolona tamin’ny tenin’ny tanana izy tao amin’ny hopitaly iray. Nanontaniany ny mpiasan’ilay hopitaly raha nisy marary hafa azony niresahana tao. Dia izay no nihaonany tamin’i Kazumi. Mandre izy io fa tsy mahay miteny. Tratran’ny lozam-piarakodia izy tamin’izy 23 taona ka lasa malemy. Tsy afaka mitelina sakafo na misotro rano koa izy. Betsaka ny zavatra nanitikitika ny sainy, ka tonga dia nanaiky hianatra Baiboly izy.
Japon: Tian’i Kazumi ny manoratra taratasy mampahery
Apetrak’i Michiko ny fanontaniana, dia tondroin’i Kazumi eo amin’ny fehintsoratra ny valiny na soratany. Afaka niara-nanao teny vakina isa-maraina izy mirahavavy rehefa nahazo finday i Kazumi. Nihaosa izy fa ny finoany kosa nihanatanjaka, ka naniry ho lasa Vavolombelon’i Jehovah izy. Lasa mpitory tsy vita batisa ihany izy rehefa avy nianatra nandritra ny 13 taona. Efa 61 taona izy tamin’io.
Tsy afaka mamonjy fivoriana na fivoriambe i Kazumi, ka nataon’ny fiangonana izay hahafahany mihaino ny fandaharana rehetra. Mifandimby mamaky ny valin-teny efa nomaniny koa ireo anabavy mandritra ny fivoriana.
Te hampahery an’ireo mpianatra Baiboly efa mivory i Kazumi ka anoratany taratasy tsirairay izy ireo. Itoriany koa ny mpiasan’ny hopitaly sy izay olona mitsidika azy. Hoy izy: “Ho sambatra ianareo raha mianatra Baiboly.”
Nahita ny fahamarinana ilay moanina
Nandeha nijery maso tany amin’ny hopitaly ny anabavy iray any Azia Atsimoatsinanana. Nahita moanina izy tany ka nanontany hoe: “Tianao ve ny hanana fahasalamana tonga lafatra sy hiaina mandrakizay ao amin’ny toerana tsara tarehy?” Nahafinaritra ny resak’izy ireo taorian’izay. Nandray bokikely Mihainoa An’Andriamanitra ilay lehilahy sady nanome nomeraon-telefaonina. Nisy rahalahy teo anivon’ny fiangonana nomen’ilay anabavy an’ilay nomerao. Niantso azy ilay rahalahy sady nanasa azy hanatrika lahateny manokana. Tonga tokoa izy ary tena tiany ilay fivoriana, indrindra fa ny hiran’ilay Fanjakana. Faly koa izy fa noraisina tsara.
Nanontany ilay moanina raha manana oniversite isika na sekoly fiofanana ho mpitondra fivavahana. Nilaza ilay rahalahy fa fampianarana Baiboly ho an’ny olona tsirairay no ataontsika, ary nasainy hianatra izy. Nanaiky izy ka voaomany tamin’ilay herinandro nanaraka ny toko voalohany amin’ny boky Ampianarina. Nianatra foana izy ary nanomboka nivory sy nanome valin-teny tamin’ny fianarana Ny Tilikambo Fiambenana.
Nasain’ny solontenan’ny sampana hitsidika Betela izy, tamin’izy nanatrika fivoriamben’ny faritra. Nanao dia adiny folo teo ho eo izy ny herinandro nanaraka mba hahatongavana tany. Faly nandray azy ny olona tao. Niala tsy ho moanina intsony izy tamin’ny faran’ny volana Febroary 2015, ary mbola mianatra Baiboly sy mandray anjara amin’ny fivoriana.
Very fa hita indray
Nisy mpivady mpisava lalana voatendry hanompo tany amin’ny faritra avaratratsinanan’i Inde. Efa taona maro tany no tsy nitoriana. Betsaka ny olona liana, ka nitady toerana azo anaovana fivoriana izy mivady. Nahita trano vao aorina izy ireo, indray andro, rehefa handeha hampianatra Baiboly. Niverin-dalana izy ireo mba hanontany momba an’ilay trano. Nahita vehivavy iray efa zokiolona izy ireo tao ambadik’ilay trano, ary nilaza taminy fa Vavolombelon’i Jehovah izy ireo. Faly be ilay ramatoa. Vavolombelon’i Jehovah koa, hono, izy. Nampandrosoiny izy mivady ary nasehony an’ireo boky sy gazetiny tamin’ny 1970 sy 1980 tany ho any. Efa tamin’ny 30 taona lasa, hono, izy no nianatra Baiboly tamin’ny mpisava lalana, ary nanatrika fivoriana sasany na dia nanohitra aza ny vadiny. Resy lahatra izy hoe nahita ny fahamarinana, nefa tsy afaka nifandray tamin’ny fandaminana intsony rehefa lasa ireo mpisava lalana. Samy nanaraka izay fivavahana tiany ny zanany, fa izy tsy nandeha na taiza na taiza.
Inde: Vehivavy iray tia fahamarinana, mampiseho an’ireo boky sy gazetiny tamin’ny 1970 sy 1980 tany ho any
Nanomboka nanery azy ho any amin’ny Katolika ny zanany, vao haingana. Amin’izay, hono, mba mahazo Lamesa izy rehefa maty. Ny rahavaviny aza efa nitondra azy hisoratra anarana tany mihitsy, saingy nikatso ny fifamoivoizana dia niverina nody ry zareo. Saika hoentiny indray izy ny ampitso fa narary. Dia tamin’io andro io izy no nihaona tamin’ireo mpisava lalana. Mianatra Baiboly indray izy izao, manatrika fivoriana, ary mampirisika ny zanany sy ny zafikeliny hianatra Baiboly.